ကြက်ညှာရောဂါကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ကြက်ညှာရောဂါကာကွယ်ဆေး (အင်္ဂလိပ်: Pertussis vaccine)သည် ကြက်ညှာရောဂါဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည့် ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဆဲလ်အပြည့်ပါသော ကာကွယ်ဆေးနှင့် ဆဲလ်မပါသော ကာကွယ်ဆေးဟူ၍ အဓိကနှစ်မျိုးရှိသည်။ ဆဲလ်အပြည့်ပါသော ကာကွယ်ဆေးမှာ (၇၈)ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကာကွယ်နိုင်ပြီး ဆဲလ်မပါသော ကာကွယ်ဆေးမှာ (၇၁-၈၅)ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကာကွယ်မှုပေးသည်။ ဤကာကွယ်ဆေး၏ အစွမ်းမှာ တစ်နှစ်လျှင် (၂-၁၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကျဆင်းသွားပြီး ဆဲလ်မပါသော ကာကွယ်ဆေးသည် ကျဆင်းမှုပိုမြန်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်အတွင်း ဤကာကွယ်ဆေးထိုးလျှင် ရင်သွေးငယ်ကိုပါ ကာကွယ်မှုပေးနိုင်သည်။ (၂၀ဝ၂)ခုနှစ်တွင် ဤကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့် လူပေါင်းသန်းတစ်ဝက်ခန့်၏အသက်များကို ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့်တိုက်ဖျက်ရေး ဗဟိုဌာနတို့၏ အကြံပြုချက်အရ ကလေးများအားလုံးကို ကြက်ညှာရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသင့်ပြီး ပုံမှန်ထိုးသင့်သောကာကွယ်ဆေးများစာရင်းထဲတွင် ထည့်သွင်းထားသင့်သည်။  အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ရောဂါပိုး (HIV)/ ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ (AIDS) ကူးစက်ခံနေရသောသူများကိုပါ ထိုးပေးသင့်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို (၃)ကြိမ်ထိုးပေးရပြီး ကလေးအသက်(၆)ပတ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ထိုးပေးသင့်သည်။ အပိုဆောင်းအနေဖြင့် အသက်ပိုကြီးသော ကလေးများနှင့် လူကြီးများကိုပါ ထိုးပေးနိုင်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို အခြားကာကွယ်ဆေးများနှင့် ရောစပ်ထားသောဆေးအနေဖြင့်သာ ရရှိနိုင်သည်။
ဆဲလ်မပါသောကာကွယ်ဆေးသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပို၍နည်းပါးသောကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် အသုံးများသည်။ ဆဲလ်အပြည့်ပါသော ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးပေးလိုက်သော ကလေးများ (၁၀-၅၀)ရာခိုင်နှုန်းတွင် ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် နီရဲခြင်းနှင့် ကိုယ်ပူခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ ကလေးပေါင်း တစ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်တွင် ကိုယ်ပူ၍တက်ခြင်းနှင့် အချိန်ကြာရှည်စွာငိုခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ ဆဲလ်မပါသော ကာကွယ်ဆေးသည်လည်း လက်မောင်းတွင် မပြင်းထန်သောရောင်ရမ်းခြင်း ခဏတာဖြစ်တတ်သည်။ ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးစလုံး၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် ကလေးအသက်ပိုငယ်လျှင် ပို၍အဖြစ်များသည်။ သို့သော်လည်း ဆဲလ်အပြည့်ပါသော ကာကွယ်ဆေးတွင် အဖြစ်ပိုများသောကြောင့် ၎င်းဆေးကို ကလေးအသက်(၆)နှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ပေးရန်မသင့်ပါ။ ကြာရှည်စွာဖြစ်သည့် ပြင်းထန်သော အာရုံကြောဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများကိုတော့ ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးစလုံးကြောင့် မဖြစ်နိုင်ပါ။
ကြက်ညှာရောဂါကာကွယ်ဆေးကို (၁၉၂၆)ခုနှစ်တွင် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ မေးခိုင်၊ ဆုံဆို့၊ ပိုလီယိုနှင့် အဆုတ်ရောင် ဘီရောဂါကာကွယ်ဆေးများနှင့် ရောစပ်ထားသော ငါးမျိုးစပ်ကာကွယ်ဆေးတစ်လုံးကို (၂၀၁၄)ခုနှစ်တွင် (၁၅.၄၁)ဒေါ်လာခန့် ပေးရသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ "Pertussis vaccines: WHO position paper - September 2015." (Aug 2015). Wkly Epidemiol Rec 90 (35): 433–58. PMID 26320265.
↑ "Acellular vaccines for preventing whooping cough in children." (Sep 17, 2014). The Cochrane database of systematic reviews 9: CD001478. doi:10.1002/14651858.CD001478.pub6. PMID 25228233.
↑ Annex6whole cell pertussis။ World Health Organization။5June 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pertussis: Summary of Vaccine Recommendations။ Centre for Disease Control and Prevention။ 12 Dec 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Vaccine, Pentavalent။ 8 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကြက်ညှာရောဂါကာကွယ်ဆေး&oldid=341670" မှ ရယူရန်
၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၀၈:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။